ALAOTRA MANGORO : Tafatsangana ny komity hikarakara ny foara “Zama 2016”
Taorian’ny fivoriana nisesy mahakasika indrindra ny fanomanana ny foara “Zama 2016” dia fantatra fa efa tafajoro amin’izao fotoana izao ny komity hikarakara izany. 24 mai 2016
Noentanina avokoa ireo sampan-draharaha rehetra na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana mba hiaraka hientana amin’ny fikarakarana izany. Isan’ny tanjona iray lehibe ho tratrarin’ny Faritra Alaotra Mangoro amin’ity foara ity ny hampisongadina ny sehatry ny fambolena sy ny vakoka mampiavaka ny faritra iray manontolo.
Raha ny nambaran’ny Lehiben’ny Faritra, Raminoarison Honoré, dia isan’ny hanana andraikitra manokana mahakasika ny fikarakarana ny foara “Zama 2016” ny Mpanolotsaina manokan’ny Lehiben’ny Faritra, Ratovotahaka Miandravola noho izy efa zatra mikarakara hetsika goavana.
Antenaina fa hizotra an-tsakany sy an-davany ny foara amin’ity taona 2016 ity, izay efa andrasan’ny rehetra amin’izao miaka-bokatra izao. Manomboka ihany koa ny fanentanana ireo orinasa rehetra na ao Alaotra Mangoro n any any ivelan’ny Faritra ny amin’ny fanasana azy ireo handray anjara mavitrika amin’ny fampirantiana ny vokatra vokarin’izy ireny mandritra ny “Zama 2016”.